Famerenana ny boky foronina
Famerenana sy fanakianana ny boky fiction
Trojan Horse 12. Betlehema
Hain'i Don Juan José Benítez ny manipy ny pisto toy ny tsy misy hafa. Ny andian-tsarimihetsika Trojan Horse dia mendrika ny faharanitan-tsaina ambony amin'ny atiny, ny endrika ary ny varotra. Ny zava-misy sy ny tantara foronina dia mahaforona rojo tsy azo sarahina izay mihetsika miaraka amin'ny fizarana tsirairay toy ny dihy ADN manamarika ny fiafaran'ny fihodinana. Y…
Iza no nilaza fa maty ny karazana adventure? Resaka mpanoratra toa an'i Luis Montero ihany no nanatona azy tamin'ny fiahiahiana manokana mba hahafahantsika rehetra mieritreritra indray fa kely sisa no ho hita eto amin'ity izao tontolo izao ity sy izay tokony hatao. Misy foana…
Lazarillo de Tormes, tantara kely mahafinaritra
Ny zava-misy fa tantara tsy fantatra anarana izy io dia mety nanafaka ny mpanoratra azy tamin'ny famerenana famintinana sy ny sivana tamin'ny androny. Satria navoaka tamin'ny 1554, "Ny fiainan'i Lazarillo de Tormes sy ny harenany ary ny fahoriana", araka ny iantsoana azy amin'ny lohateny feno, dia nanana...
La Costa de las Piedras, tantara momba ny aventure any Mallorca
Tantara fitsangatsanganana tonga amintsika amin'ny solon'anarana an'i Alejandro Bosch, angamba hiafara amin'ny famadihana ilay teboka mistery manondraka ilay tetika. Satria ny tantara dia miala amin'ny singa magnetika amin'ny zava-niainana rehetra mifototra amin'ny enigma ara-tantara. Natolotra ho amin'ny lanonana amin'ny loko marevaka miaraka amin'ny…
Ny teny ankininay amin'ny rivotra, nataon'i Laura Imai Messina
Denaturation ny fahafatesana rehefa tsy mivoaka araka ny tokony ho izy ny toerana misy azy. Satria ny miala amin'ity tontolo ity dia mamafa ny fahatsiarovana rehetra. Ny tsy voajanahary tanteraka dia ny fahafatesan'ilay olon-tiana izay teo foana, na dia tao anatin'ny loza iray aza. Fatiantoka tsy nampoizina indrindra...
pejy1 pejy2 ... pejy98 manaraka →